Tourism Package | MAHAR SHWE SAGA | Myanmar
MAHAR SHWE SAGA
Tourism Package ( Inbound)
Tourism Package (Inbound)
မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော် (2 ညအိပ်/3ရက်)
Mandalay – Pyin Oo Lwin Flower Festival Vacation ( 2Nights/3Days )
ခုလို စာမေးပွဲတွေလည်း ပြီးပြီဆိုတော့ ခရီးလေးတွေသွားရအောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မိသားစုနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အမြန် ဆုံးစဉ်းစားပြီး သွားကြရအောင်နော်
ပြင်ဦးလွင် (ပြည်ချစ်ဘုရား) မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရား
စတဲ့အလှအပတွေ ရှုခင်းကောင်းကောင်းလေးတွေရှိတဲ့ နေရာလေးတွေအများကြီးပါပဲနော်
မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တောြ်မတ်ကြီးမှာသက်ရှိထင်ရှားဘုရားကိုယ်ပွား သမိုင်းဝင် ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ရဲ့ကျက်သရေဆောင် အဓိက ထင်ရှားသော ဘုရားတစ်ဆူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..မန္တလေးကိုရောက်တဲ့သူတိုင်း မဟာမုနိ သို့ ရောက်ပြီး ဦးတိုက်ရမှာပေါ့နော်…. ဘုရားဖူးပြီးရင် ငါးကန်၊လိပ်ကန်တို့မှာ အစာကျွေး ကုသိုလ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်
ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာတည်ထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ မဟာအံထူးကံသာဘုရား (ခေါ်) ပြည်ချစ်ဘုရားကြီးကတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်း တရုတ်ပြည်ကိုခိုးဖို့ ကားပေါ် ပြန်လည်ရရှိသောဘုရားကြီးဖြစ်ပါတယ်…. ပြည်ချစ်ဘုရားဟုလည်းခေါ်ပါတယ်….
ကိုရီးယားက ပန်းပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖန်းတီးထားတယ့် ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော် ရဲ့အလှအပတွေခံစားပီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ်။အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၄၃၆.၉၆ ဧက ဖြစ်ပြီး ကုန်းမြေဧကမှာ ၃၆၆.၉၆ ဧက နှင့် ရေပြင်အကျယ်မှာ ၇၀ ဧကကျယ်ဝန်းလှသော အမျိုးသားကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်မှာ အပန်းဖြေကြမယ်။
တရုတ်ဘုံကျောင်းမှာ သွားပြီးဗေဒင်တွက်ကြမယ် ရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့လည်း အမှတ်တရပုံလေးတွေရိုက်လို့ရတယ်နော်...
(BE Fall) ပိတ်ချင်းမြောင် ရေတံခွန်မှာ အလှဆုံးတွေရဲ့ပုံလေးတွေမှတ်တမ်းတင်မယ်…အေးမြတဲ့ ရေလေးတွေနဲ့ ရေကစားကြမယ်..
ပြင်ဦးလွင် ဒီဇင်ဘာခြံဆိုရင် လည်ပတ်ဖူးသူတိုင်း မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါဘဲနော်။ ခြံဝန်းကျယ်ကျယ်နဲ့ စတော်ဘယ်ရီ စိုက်ခင်း၊ မက်မန်းပင်လေးတွေ၊မြင်း၊ ယုန်၊ နွား အစရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးခြံတွေကိုပါ သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပြီး ဒီဇင်ဘာခြံမှာ အစားအသောက်ထက် ဓာတ်ပုံဝါသနာအိုးတွေ အကြိုက်တွေ့တဲ့ ဆိုင်ပါ။ ဆိုင်ရဲ့ ခြံထွက် နွားနို့စစ်စစ်ကလည်း အရသာ ကောင်းမွန်လွန်း၊ ကိုယ်တိုင်လှော် နေကြာစေ့ စိမ့်စိမ့်လေးကလဲအသဲဆွဲစေမှာပါလို့။အခုလိုရာသီဆို ခြံထွက်စတော်ဘယ်ရီလေးကို ဒိန်ချဉ်လေးနဲ့စားလိုက်ရရင်တော့ဖြင့်အသဲဆွဲသွားမယ်နော်။
မန္တလေးမြို့ရဲ့တောင်ဘက် အမရပူရမြို့မှာရှိပြီး ဦးပိန်တံတားဟာကျော်ကြားလွန်းပါတယ်…နှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော် သက်တမ်းရှိပြီးဖြစ်တဲ့ ဦးပိန်တံတားဟာ မြို့တော်ဝန် ဦးပိန် ဟာအမရပူရ နန်းတော် ရွေ့ပြောင်းရာမှကျန်ခဲ့သော ကျွန်းတိုင်များနှင့် တောင်သမန်အင်းကြီးကို ဖြတ်ကာ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ 1.2km ရှည်လျားပြီး ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ကျွန်သစ်တံတားကြီးမို့ အမရပူရရောက်ရင်တော့ အမှတ်တရတခုပါဘဲနော်…
အမရပူရမြို့မှာတည်ရှိတဲ့ ဆုတောင်းပြည့် ကျောက်စိမ်းဘုရားကြီးကိုသွားရောက်လည်ပတ် ဖူးမေ ျာ်ကြမယ်။အမရပူရမြို့ရဲ့ ုမဟာဂန္တရုံ ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးက အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံး၊ နိုင်ငံခြားသားများ အသွားချင်ဆုံးနေရာ တခုကိုတော့ရောက်ရမယ်လေတကယ့်ကိုသွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာတွေထဲက တစ်ခုပါနော်။
ဈေးကလဲသက်သာတယ် ဝန်ဆောင်မှုကလဲထိပ်တန်း ဆိုတော့ လူပြည့်တာမြန်ပါတယ်။ အဲအတွက်မြန်မြန်စာရင်းပေးဖို့တော့လိုမယ်နော်
Mahar Shwe Saga ကတော့ယုံကြည်ချက်အတိုင်းစောင့်မျှော်နေတဲ့ services ကတော့
1 Night Stay@3Star Hotel @ Pyin Oo Lwin
Tour Grade Air Con Express Car
မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာ၊ ရေသန့် ၊ စနိုးတာဝါ ၊ သွားတိုက်တံ ၊ သွားတိုက်ဆေး
အတွေ့အကြုံရှိ Tour Guide နှင့် Tour Leader များ
ခရီးသွားအာမခံ + Medical Box Service
သီးသန့်သွားချင်တဲ့ ဧည့်သည်တော်များအတွက်လဲ ...
Incentive Trekking and Hikking Tours
Private School Field Trip
Train Tour / Cruise Tour တွေကိုလဲ စုံစုံလင်လင်စီစဉ်ပေးနေပါတယ်ရှင်။
မိမိသတ်မှတ်ထားသော Budget ပေါ်မူတည်ပြီး Trip အမျိူးအစားများ Recommend ပေးခြင်း၊ စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်နိုင်ရန်အတွက် Optional Price အမျိုးမျိုး စီစဉ်ပေးခြင်း။
Family Trip / Company Trip နှင့် တက္ကသိုလ်လေ့လာရေးခရီးစဉ်များအတွက် Special Trip Plan များ အပြီးအစီး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ တောလမ်းလေးအတိုင်း လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ တောင်တန်းတွေပေါ် စခန်းချခြင်း (trekking package/ camping package) များ အတွက် Free & Easy ဖြစ်စေ Package အပြတ်ဖြစ်စေ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
Campfire activities များ Karaoke အစီအစဉ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ Private Group Tour များအတွက် ခရီးစဉ်အစအဆုံး Professional Camera များဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးပေးခြင်း။
ကားသီးသန့်ငှားချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက်လဲ #Mahar Shwe Saga Car Rental Service မှလည်းကားမျိုးစုံစင်းလုံးငှားခြင်းများကိုလဲ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင့်။ လမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတယ့် ကားဆရာများနဲ့ စီစဉ်ပေးမှာဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲရှင့်။ ဖုန်းလေးသာတချက်ဆက်လိုက်ပါနော်….
အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသူများ အနေနဲ့ chat box မှ တစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် 09 - 777667717, 09-777667727, 09-777667737
ခရီးစဉ်များကို အသေးစိတ် စိတ်ဝင်တစား စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသူများအတွက် ဖုန်း / Viber / Chat Box တို့မှတဆင့် ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်...
No.7, Thitsar Ooyin Housing, South Okkalapa Township, Yangon Myanmar
+95 (9) 777667717,
(9) 777667727, (9) 777667737,
© 2017-2020 MAHAR SHWE SAGA Co,. Ltd. All rights reserved. Web Design by NetScriper